Farqiga u dhaxeeya dabaaldegyada sannadadii hore iyo sannadkan 2021-ka | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Farqiga u dhaxeeya dabaaldegyada sannadadii hore iyo sannadkan 2021-ka
Malaayiin adduunka ku nool oo sannadka 2020-ka soo arkay dhibaatada uu horseeday fayraska corona ayaa waxay u dabaal degayaan bilowga sannadka 2021-ka inkastoo xitaa dabaaldegyada ay ka duwan yihiin kuwii sannadadii hore sabao la xirira fayraska oo waxay danta ku khasabtay in ay guryahooda ku daamaashaadaan oo ay sannadka cusub ku soo dhaweeyaan.
Inkastoo ay jiraan dadka qaar oo kaqeybgalay xafladaha ama ciidaha iyagoo wajiyada soo duubtay ama sameynaya taxaddarro kale.
Magaalada Tokyo ee hoose, dadku waxay booqdeen goobta cibaadad ee Kanda Myojin si ay ugu soo duceystaan inkastoo la dhimay tirada dadka ku duceysnaya.
Magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo magaaladii uu fayraska corona ka soo bilowday ayaa waxaa isugu soo uruuray dadweyne badan iyagoo sita buufino iyo dharka dabaal-degga, waxayna tirinayeen saacadaha ka harsan saqda dhexe oo ah xilliga kala wareegga si ay usoo dhaweeyaan sannadka cusub.
Taiwan si loo dhaweeyo sannadka cusub waxaa hawada sare loo diray bululeero inkastoo magaalooyin badan laga mamnuucay dabaaldegyada tooska ah waxayna taasi horseedday iney door-bidaan in dhanka online-ka ay ku soo dhaweeyaan sannadka 2021-ka.
Sida qoyskan oo kale oo ku sugan Kuuriyada Konfureed ayay qoysas badan oo kale oo ku sugan dunida daafeheeda ugu dabaal dageen hab ka duwan sidii hore iyagoo ku sugan guryahooda.
Halka Philippine-na ay kooxo yar-yar isugu soo baxeen jardiin ku yaalla magaalada Manila si ay u daawadaan dabaaldegga. Maamullada ayaa dadka ku boorriyay ineysan isugu imaan hal meel.
Gudaha Hong Kong, kooxo ayaa isugu soo baxay Victoria Harbor horteeda si ay si wada jir ah ugu dabaal degaan.
Magaalada Yekaterinburg ee Ruushka ayaa sidoo kale laga dabaal-degay, iyadoo dad aan sidaa u badanayn ay isu soo baxaeen.
Sawirka hoose waa Isu tagga Imaaraadka Carabta gaar ahaan xarunta Ras al-Khaimah.
Sawirkaana waa Dubai gaar ahaan dhismaha ugu dheer adduunka ee Burj Khalifa.
leeyrar iyo baaruud oo lagu soo dhaweynayo sannadka cusub ayaa hawada sare, qeybo ka mid ah magaaalada London ee Ingiriiska.
Previous articleBasmo Caamir oo raali-gelin ka bixisay hadal ay ugu geftay cayaartoyda Galmudug
Next articleCovid-19: Wasiir dalxiis iska aaday xilli ay xayiraad adag jirtay oo is casilay
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal Xoogan oo Kasocda Bariire Iyo Qasaara Kadhashay..
Wasiir Goodax oo Qoraal sixitaan ah kasoo saaray tiro ka khaldantay Madaxweyne Farmaajo
Wasiirka Gaashaandhigga oo la kulmay Taliyaha Hawlgalka Midowga Yurub ee Somalia…
Sawirro:Kuxigeenka Axmed Qoor Oo Qorshe Cajiib Ah Ka Bilaabay Dhuuso mareeb
Fahad Yaasiin oo raali-gelin ka dalbaday Xildhibaan weydiiyey ‘su’aal shaqsi ah+dhageyso
Degmada dalxiiska Xamar oo go’doon sii galaysa..!!
WAR DEG DEG AH: Banaanbax ka socda Isgoyska KM4 Muqdisho & Wadada oo xeran…
Ciidamada Dowladda oo la wareegay deegaano ka tirsan G/Bakool & Xubno Alshabab oo la dilay+ SAWIRO:-
AKHRISO: Puntland oo War kasoo saartay Xaaladda dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya…